Addii bilisuummaa ummata Tigraayi darggaggoota Raayyaadhaan yoo waraantan malee nii ajjefamttuu jachuun waraanatti dirqisiisaa jira jadhamee. - ዜና ከምንጩ
Addii bilisuummaa ummata Tigraayi darggaggoota Raayyaadhaan yoo waraantan malee nii ajjefamttuu jachuun waraanatti dirqisiisaa jira jadhamee.
Addi bilisuummaa ummata Tigraayi shororkkessaa ta’ee darggagota nanno raayyaa jiran na waliin hiriirtanii yoo waraanuu baattan nii ajjefamtuu jachuudhaan dirqisiisee waraanatti hiriirsaa jiraachu Addiis maaladaan jiraattota naannichaarraa dhageesseetti.
Gareen shororkaa adda bilisuummaa ummata Tigraayi darggaggoota Qobboo waajjaafi alaamaaxaa mana baruumsaa Qobboo Ewuuqat coorraatti walitti qabee nuu fuuldura hiiriiraatti waraanaa nutti isiin cina jirra jachuudhaan amansiisuu yaaluus darggaggonni kuun yaada isaatti walii galu didnaan isiin ajjeefnna jadhee isaan dirqisiisaa jiraachu namootiin ijaan argan bakka sana turan dubataniiru.
Gareen shoroorkaa adda bilisuummaa ummata Tigraay magaalaa Qobbootti bulchiisa mataasaa dhaabbachuudhaaf buulchiisa magaalaafii kantiibaa magaalaa filaa jiraachuusaa burqaawwan addiis maaladaa ibsaniiru. kutaaleen hawaasaa nannicha gad dhiisanii hin baanee waraqaa enyummaa naanno Amaaraa geddaruudhaan waraqaa enyummaa naanno Tigraayi akka baasan dirqisiisuudhaan waraqaa enyummaa akka geddaran dirqisiisuun qaamoolee addi biliisuummaa ummata tigraayi gurmesseen gaggeffamaa jira jadhameera.
Namoota addiis maaladaan dubbiftee gidduudhaa darggaggoo Yaareed Balaayi dhallattota amaaraa Waajjaafii Alaammaaxaatti argaman namootiin garee ABUT walitti qabuudhaan waraqaa enyummaa naanno Tigraayi fuudhadhaa jachuusaaniifii darggaggootaan immo yoo barbaaddan nuu faana ta’a yoo kanaa achii immo nii ajjefamtuu jadhanii sosodaachiisaa jiraachuunsaanii hiimameera.
Darggaggo Yaareed itti dabalees gareen ABUT magaala Qoobbootti namoota nagaa lakkoofsii isaanii hiin beekamnee kan ajjeesee yamuu ta’u magaalatti barbadeesaa qabeenyaas saamaa akkasuumas kantiibaafii bulchiisa magaalaa mataasaa fiilachaa jira jadheera,
karaa biraa Adoolessa 27/2013 naanno Raayyaatii buuqa’anii finfinnee kan galaniifii finfinnee kan jiraatan jiraattonni raayyaa walgahii geggeesaniiru. Walgahiichaaniis akka jadhaniitti lamiileen hedduu lakkofsiisaanii hinbeekamnee Raayyaatti Qobbottii waajjaafii gidaanitti garee shoroorkaa kanaan ajjeefamaniiru.dubarttonni hedduu gudeedamaniiru maanguddoliiniis rakko guddaan ira ga’eera.kanatti dabalees magaaloota kana barbadeesuudhaan qabeenyaa hedduu saameera jachuudhaan dubataniiru.
Dhiimma yeroo irattii magaalaa finfinnetti kan mari’atan jiiraattonni raayyaa lammiileen naannoo Raayyaatii buqa’anii Waldiyaatti marsaafii dasee jiraniifii naano isaaniitii ittu hin ba’iin ukkamfamanii hafan gargaarsii isaan barbaachisa ijaa ta’ee motummaan fuula isaa gara isaaniitti naannesse isaan ilaaluu qaba jadhaniiru.
Dabalataaniis ammas yoo ta’ee ABUTnaannolee garaa garaatti karaa Qobboo ,takkulish,gobiyye saanqaa, muujjaa, gidaan aleellaasaa baballiisaa jira waan ta’eef maatiwwan isaanii beelaafii waraanaan gid’iirfamaa jiruu jechuusaanii addiis maaladaan walga’iisaaniratti argamtee dhageesseetti.
Buuqaatonnii kuun gargaarssa akka isaan barbaachiisu kan ibsan dhalattonni naanno Raayyaa lamiileen naanno raayyaattii buqa’aanii waldiiyaatti argaman gargaarsii akka isaan barbaachisuu naanno yeroo shanii galmaa’uu irra darbee amma amaaatti deeggarssa ga’aa hin argannee jadhaniiru.
lakkofsii lammilee raayyafii qobbotii buqa’anii kuma 150 ol qaqqabuusaa komiishniin wabii nyaataafi ittiisa balaa naanno amaaraa ibsuunsaa kan yaadatamu yammuu ta’u lammileen naannicha gad dhiisanii hinbaane rakkorra jiraachusaanii addiis maaladaaf ibsaniiru.
Addiis maaladaan dhimmicha irratti ragaa dabalataa eda’uudhaaf kantiibaa magaalaa Qobbo Mangashaa ashabbiir bilbilaan duubbiftee deebii networkiin waan hin jirreef ragaa hin qabu jedhuu kan keennan yammuu ta’uu lammata gaafachuudhaaf yoo bilbilamees bilbillii waan hinkaaneef deebii argachuun hindandeenye.
Addiis maaladaan maxxansashee torbee darbeetiin lammileen Qobotii buqa’anii waldiyaa amma dasetti socho’aan rakkon bakka jirenyaafii nyaataa akka isaan mudate ibsuun ni yaadatama.
Total views : 7512011